Qabeentota gabatee muraa faayilii ammee keessaa kan dhangii iftessuu dandeessuu saaga.
Guulaali - Maxxansa Addaa Fili
Man'ee qabeentotaa, yaadannoowwan, dhangiwwan fi wantoota galmee ammee keessatti mara maxxansi.
Man'eewwan formulaa qabate saaga.
Man'eewwan duuwwaa gabatee muraa irraa kan man'eewwan galtee bakka hin bu'u. Dirqala kana yoo fayyadamtu walqabsiiftuu keessaa Baay'ifama waliin ykn dalgaa Hiruu, dalagni man'ee galtee man'ee duuwwaa gabtee muraa keessa.
Dalaga herreegaa filtuu fi sanduuqa Man'eewwan dhiisi qulqulleessituu, keessatti akka zeerootti lakkaa'amu. Fakkeenyaaf dalagaa Baay'isuu fayyadamtu, man'eewwan galtee zeeroodhaan guutame.
Hangiin tarreewwan gabatee muraa keessaa maxxanfameera sarjaawwan bu'aa hangii gabatee muraa keessa tarreewwan ta'uuf maxxanfamaniiru.
Hangii man'ee akka geessituutti saaga, kunis akka jijjiiramni man'ee madda faayilii irratti taasifame galtee faayilii keessatti haarofama. Jijjiirama man`eewwan duwwaa madda faaylii keessaan galtee faayilii keessatti haareffame mirkaneefachuudhaaf, dabalataan filannoon Hunda Saagi filamuu isaa mirkaneessi.
Title is: Maxxansa Addayaa